RASMI: Patrice Evra oo heshiiska u kordhiyay Juventus – Gool FM
RASMI: Patrice Evra oo heshiiska u kordhiyay Juventus
Byare June 6, 2016
(Turino) 06 Juunyo 2016. Daafaca reer France Patrice Evra ayaa heshiis hal sano ah oo waliba leh dooq sanad kale ah u kordiyay horyaaladda Serie A ee Juventus.
Daafaca khabiirka ah kaa oo naadiga Marwada Duqada ah kaga soo biiray Man United sanadii 2014 ayaa ku sii negaan doona dalka Talyaaniga ilaa ugu yaraan dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda ee 2016-17.
“Patrice Evra ayaa maanta hal sano oo heshiis ah u cusbooneysiiyay Juventus, kaa oo leh dooq sanad kale inuu ku sii darsan karo, waxayna ku sii heynaysaa Turin ilaa ugu yaraan 30-ka June 2017.”. Sidaa ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay kooxda Juventus.
EEG SAWIRRADA: Jamie Vardy miyuu ku biiray Arsenal?????
Koox kasta iyo kulamadeeda Premier League ee xilli ciyaareedka cusub 2016/17 oo la shaaciyay....(Yay kooxdaadu la ciyaari doontaa kulanka furintaanka, yaase u xiga?)